योग दिवस र मानसाग्नि मिसन
हेडसरदेखि सभामुखसम्मको यात्रामा सापकोटा
उपल्लो डोल्पामा हिमपात रोक्न हिउँमै बसेर पूजा
अज्ञात समुहद्वारा मोरङमा बम बिस्फोट
हमला गर्ने योजना बनाएको गिरोह पक्राउ
साझा प्रजातान्त्रिकका उम्मेदवारलाई जिताउने राजपाको प्रतिबद्धता
डुडुवामा कार्यालय प्रमुखको बैठक
भ्यू टावरमा निप्सको वनभोज
१ सय ८५ बृद्धबृद्धालाई न्यानो लुगा प्रदान
ब्राउनसुगरसहित विकास पक्राउ
मगलवार, माघ १, २०७५ सेतोखरी
नेपालमा यही माघ १ गते ‘शान्ति र समृद्धिका लागि योग, योगी बनौँ र योग सिकाऔँ” भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय योग दिवस मनाइँदै छ । योग दिवसको अवसरमा प्रत्येक वर्ष मनाउँदै आइरहेको योग दिवसको इतिहास के कस्तो छ र त्यसमा ककसको मुख्य योगदान रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।
कुनै पनि महान् व्यक्तित्वको साधना, तपस्या र निरन्तर सङ्घर्षका फलस्वरूप कुनै पनि दीर्घकालीन सामाजिक सेवा हुने गर्छ । यस्ता सेवाबाट लाखौँ करोडौँ व्यक्तिले सेवा प्राप्त गर्छन् तर ती सेवा त्यस स्तरसम्म पुर्याउन कस कसको महत्त्वपूर्ण हात रहेको छ भन्ने कुरा इतिहासमा मात्र होइन, सन्ततिहरूलाई समेत हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा मनाइने राष्ट्रिय योग दिवस हाल आएर एउटा पर्वका रूपमा स्थापित भएको छ र योग दिवसलाई विश्वमा विश्व योग दिवस भनेर जुलाई १ तारिखका दिन विगत ४ वर्षदेखि मनाउने गरिएको पनि छ । योग र योगदर्शन के हो, योगको प्रारम्भ कहिलेदेखि भएको हो ? यसको विकास र प्रगतिका लागि केकस्ता प्रयास भएका छन् र नेपालमा योग दिवसको सन्दर्भ यस आलेखमा चर्चा गरिनेछ ।
योग र योगदर्शन
योगको अर्थ जोड्नु भन्ने लाग्छ । वास्तवमा अनात्मबाट आत्मालाई छुट्याएर परमात्मासँग जोड्नु नै योग हो भनिन्छ । पतञ्जलीको योग दर्शनमा भएअनुसार योग त्यो प्रयत्न हो, त्यो साधना वा अभ्यास हो, जसको माध्यमले चित्त र इन्द्रियलाई वशमा गरिन्छ । यसरी चित्तमा आउने विकार रोक्नु नै योग हो भनिन्छ । शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि र अहंकारमाथि विजय प्राप्त गरेपछि आत्माको शुद्ध स्वरूप पाउन सकिन्छ र त्यही शुद्ध स्वरूप प्राप्त गर्ने माध्यम नै योग हो ।
वेद, उपनिषद्, स्मृति र पुराणमा योगको उल्लेख पाइनुले योग प्राचीन ऋषिमुनिहरूको अनवरत तपस्या र साधनाबाट विकसित भएको हो भन्न सकिन्छ । त्यस्तै बुद्ध धर्मका पालित्रिपिटकहरूमा र प्राचीन संस्कृत ग्रन्थहरूमा पनि योगका चर्चा भएका छन् । जैनधर्ममा पनि महावीर स्वामी आफै योगी थिए र उनको समयमा योगको विवेचना बढी भएको पाइन्छ । गोरखनाथको नाथ सम्प्रदायमा पनि योगको यति आदर गरिन्छ कि त्यस सम्प्रदायलाई योगी सम्प्रदाय भनिन्छ । यसरी योग हरेक धर्म र सम्प्रदायमा लोकप्रिय नै रहेको पाइन्छ । योगका चार प्रकार छन् । ती हुन्— मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग र राजयोग । तीमध्ये पतञ्जलीले राजयोगलाई अघि बढाएका छन् । त्यसकारण आज हामी योग भन्नासाथ पतञ्जलीको राजयोग भनी बुझ्छौँ । पतञ्जली योगसूत्रका रचयिता र व्याकरण भाष्यका निर्माता हुन्, जसको रचना विक्रमपूर्व दोस्रो शताब्दीमा भएको पाइन्छ ।
योगदर्शनका प्रतिपादक ऋषि पतञ्जली हुन् । त्यसैले योग दर्शनलाई पतञ्जली योग पनि भनिएको हो । भारतीय तथा पश्चिमाहरूले योगलाई योगा भन्ने गर्छन् । योगदर्शन भारतीय दर्शनशास्त्रको एउटा अत्यन्त पुरानो शाखा हो, जसलाई व्यवस्थित रूप दिने काम ऋषि पतञ्जलीले गरेका हुन् । हाल स्वामी रामदेवले पतञ्जलीकै नामबाट योगलाई बढी लोकप्रिय गराउने काम गरेका छन् । त्यस्तै नेपालमा पनि विभिन्न योग गुरुहरूले विभिन्न सङ्घ संस्थामार्फत योग कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । जति जति समाजको विकासको गति बढ्दै गइरहेको छ, त्यति त्यति नै योगको आवश्यकता पनि महशुस् हुँदै गइरहेको पाइन्छ । ५, १० वर्षअघिसम्म पश्चिमा विकसित देशहरूमा योगतर्फ थोरै मानिसको मात्र संलग्नता थियो जबकि आजको अवस्थामा धेरै विकसित देशका अधिकांश मानिसहरूले पनि योगलाई अपनाउन थालेका छन् ।
योग दर्शनमा धर्म कर्मका लागि यज्ञ यज्ञादि र पूजापाठको कुनै गुञ्जायस छैन । केवल यस दर्शनमा शारीरिक तथा मानसिक शक्तिको उचित प्रयोग गर्ने प्रेरणा पाइन्छ । यस दर्शनले स्वअध्ययनका लागि प्रेरणा दिन्छ भने ईश्वरको ध्यान ईश्वर वाचक ॐ (ओउम्) को उच्चारण गरी चित्त एकाग्र गराउन भन्छ । योग भारतीय मनिषीहरूको आध्यात्मिक चिन्तनको सारभूत तत्व हो भए पनि यो दर्शनले पूर्व तथा पश्चिमका सारा जगतहरूलाई जोड्ने काम गरेको छ । सबै किसिमका धर्म तथा सम्प्रदायले यसको अभ्यास गरेका हुनाले योगलाई सार्वभौम अभ्यास पनि भन्ने गरिन्छ । लगभग सबै खालका धर्म तथा दर्शनहरूमा योगाभ्यासको महत्त्व दिइएको हुनाले योगदर्शनको महत्त्व बढी छ । यस दर्शनमा आसन, यौगिक क्रिया, प्राणायाम तथा अन्य व्यायामहरूको माध्यमबाट आध्यात्मिक उपलब्धि पाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू दर्शाइएको छ ।
योग दर्शनले मुक्ति प्राप्तिका लागि ८ वटा मार्गहरू (अष्टाङ्ग योग) उल्लेख गरेको छ । ती हुन्
– यम: हिंसा, चोरी, लोभ आदि नगर्नु अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य र अपरिग्रह ।
– नियम: ५ नियमहरूको पालना गर्नु जस्तै–शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय र ईश्वरप्रति विश्वास गर्नु ।
– आसन: मन एकाग्र गरी आनन्दको अनुभूति गर्नु ।
– प्राणायाम: श्वास प्रश्वास नियन्त्रण गरी मनलाई एकाग्र राख्नु ।
– प्रत्याहार: इन्द्रियको कुप्रभाव मनमा पर्न नदिनु ।
– धारण: अन्तरनिहित वस्तुको पहिचानमा मन लगाउनु ।
– ध्यान: निश्चित विषयमा एकाग्रतापूर्वक सोंचविचार गर्नु ।
– समाधि: सम्पूर्ण चेतनालाई खिचेर आत्मामा लिन गराउनु । उल्लेखित यस्ता उपायहरूद्वारा मुक्ति मिल्दछ भन्नु योगदर्शनको मुख्य मर्म हो ।
मानसाग्नि र मानसाग्नि मिसन
नेपालमा योगको चर्चा गर्दा मानसाग्निको मुख्य चर्चा हुने गर्छ । यसको बारेमा आम पाठकहरू अनभिज्ञसमेत हुनसक्ने भएकाले योग दिवसको पूर्वसन्ध्यामा मानसाग्निको बारेमा चर्चा गर्नु उत्तम र सम्मान समेत हुनेछ । शैव दार्शनिक विचार र साधनाबाट योगले विज्ञानको रूप लिएको र यस्तो दर्शनका प्रतिपादक महादेव अर्थात् शिवलाई मानिन्छ । नेपालमा मुख्य शिव सभ्यता, बुद्ध सभ्यता र जनक सभ्यताबाट विभिन्न दर्शनहरू आएका हुन् । यिनै दर्शनमा टेकेर आफूलाई साधक बनाई निरन्तर रूपमा यसै क्षेत्रमा लागि नेपालमा प्राकृतिक चिकित्सासँग जोडेर अघि बढाउने योग, आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्साका विशेषज्ञ व्यक्तित्व मानसाग्नि हुनुहुन्छ । साधनाको नामबाट मानसाग्नि नामकरण गर्नुभएका नेपालका प्राकृतिक चिकित्साका जनक तथा योग र आयुर्वेदका प्रणेता डा. हरिप्रसाद पोखरेलको भिजन वा मिसन नै मानसाग्नि मिसनको नामबाट प्रचलित छ ।
आबाल ब्रह्माचारीका रूपमा रहनुभएका पाल्पाको मदनपोखरामा वि.सं. २०२० सालमा जन्मनुभएका मानसाग्नि सोह्र वर्षको उमेरमै हरिप्रसाद पोखरेलबाट मानसाग्नि बन्नुभएको हो । मानसाग्निले नै वि.सं. २०३६ साल माघ १ गते अर्थात् मकर सङ्क्रान्तिका दिन नेपालमा योग संवत् घोषणा गरी विश्व योग दिवस मनाउनुपर्छ भनी उद्घोष गर्दै नेपालमा योगका क्षेत्रमा पुनर्जागरण प्रारम्भ गर्नुभएको हो । योगमा शारीरिक शुद्धताभन्दा मानसिक शुद्धता धेरै गुणा उत्तम मानिने हुँदा यस्तो बहुउपयोगितापूर्ण योगलाई प्राकृतिक चिकित्सासँग जोडेर अतुलनिय योगदान मानसाग्निले दिइरहनुभएको छ ।
२०३६ सालदेखि हालसम्मको निरन्तर उहाँको यात्राले चार दशक पूरा गर्न लाग्दा नेपालले माघ १ गतेलाई राष्ट्रिय योग दिवसका रूपमा मनाउन थालेको छ । यसैगरी मानसाग्नि मिसनका परिकल्पनाकार मानसाग्निकै पहल र सङ्घर्षबाट प्रत्येक वर्ष असार २० गते राष्ट्रिय प्राकृतिक चिकित्सा दिवससमेत मनाउन सुरु गरिएको छ ।
यसका साथै आयुर्वेद, योग र प्राकृतिक चिकित्साको क्षेत्रमा मानसाग्निको अथक प्रयासबाट शिक्षा क्षेत्रमा समेत पाठ्यक्रममा यी विषय समेट्ने काम भएका छन् । हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा योग र प्राकृतिक चिकित्सा प्राध्यापन गर्ने पहिलो व्यक्तिको रूपमा समेत मानसाग्नि स्थापित हुनुभएको छ । आफूबाटै स्थापना गरेको काठमाडौँको भिमसेनगोलामा अवस्थित प्राकृतिक चिकित्सालयमा योग र प्राकृतिक चिकित्साको प्रयोगात्मक कक्षासमेत निःशुल्क सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । यसरी गुरुकुल पद्धतिमा मात्र चलिरहेको योग र प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षालाई विद्यालय र विश्वविद्यालयको ढाँचामा लगि औपचारिक शिक्षाका रूपमा नेपालमा पठनपाठन गराउने पद्धतिको सुरुवात गर्नु मानसाग्निको निकै ऐतिहासिक कदम हो, जसले गर्दा उहाँलाई निरन्तर स्मरण गराइरहने सुनिश्चित छ ।
अहिले उहाँकै संयोजकत्व वा अध्यक्षतामा क्याम्पस स्तरका बीएड् तथा एमए तहमा र प्राकृतिक चिकित्सकका लागि पाठ्यक्रमसमेत निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यसरी प्रकृतिप्रेमी मानसाग्निको बाल्यकालदेखिको यात्रा हाल साधना, शिक्षा, वाङ्मय, साहित्य र प्राकृतिक चिकित्सकका रूपमा उदाएको छ । दर्जनौँ पुस्तक र ग्रन्थहरू प्रकाशित गरिसक्नुभएका र ‘राष्ट्रयोगी’लगायत दर्जनौँ सम्मानबाट सम्मानित मानसाग्निको बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्वको जतिसुकै वर्णन गरे पनि सकिँदै नसकिने सामाजिक योगदानहरू छन् ।
अत्यन्तै सरल, सरस स्वभावका धनी र योग, प्राकृतिक चिकित्सा तथा आयुर्वेदका पर्याय आकर्षक व्यक्तित्व मानसाग्निको समीपमा मात्र जाने हो भने पनि उहाँको तेजस्वी नेत्र, मधुर मुस्कान एवम् मधुरो आवाजले जो कोहीलाई पनि आकर्षित गर्दछ ।
‘जस्तो चिन्तन त्यस्तै चरित्र’ को विलक्षण मेल देख्न मानसाग्निकै समीपमा जानुपर्छ र उहाँको ‘स्वधर्म’लगायतका दार्शनिक विचारको प्रचार प्रसारमा जुट्नसके आम नेपाली मात्र होइन, विश्वभरका मानव समुदायलाई प्रेरणा मिल्न जाने देखिन्छ ।
हाल मानसाग्नि वा डा. हरिप्रसाद पोखरेल शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित योग दिवस मूल समारोह समितिका सदस्यको हैसियतमा व्यस्त हुनुहुन्छ । मानसाग्निकै विचारमार्फत योग दिवस मनाई ‘योग गरौँ, योगी बनौँ’ भन्ने मूल मन्त्र साकार पार्नु हामी सबैको कर्तव्य पनि रहेको छ । मानसाग्निको यो अथक प्रयास अझै जारी रहोस् भन्ने कामना छ । यसरी नेपालमा राष्ट्रिय योग दिवस र मानसाग्नि एक अर्काका परिपूरक छन् भन्नेकुराको सहजै पुष्टि गर्न सकिन्छ । (-रातोपाटीबाट)
प्रकाशित मिति: मगलवार, माघ १, २०७५, ०१:०१:००
के पृथ्वीनारायण शाह ‘राष्ट्रघाती’ हुन् ?
थुनुवा नं १५: बाँके चिसापानी घटना
विश्वबजारमा पुर्नबीमाको अवस्था, अवसर र चुनौती
खाद्य बस्तुको भ्रमपूर्ण विज्ञापन बन्द गर
दोषीमाथि कारबाही कहिले ?
शनिवार, भदौ २१, २०७६ सेतोखरी
तत्कालिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी प्रमुख एसपी मिङ्मार लामाले अवकास प्राप्त गरिसके । यो घटनाको अनुसन्धानमा प्रत्येक्ष संलग्न रहेका तत्कालिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका निमित्त प्रमहरी प्रमुख राजकुमार बैदावार र वडा प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सुधिरराज शाहीकै गैरजिम्मेवारी, भ्रष्टता, कमजोर कार्यकुशलताका कारण मुख्य अपराधी र त्यससंग जोडिएका व्यक्तिले उन्मुक्ति पाए । अहिले यीनिहरुको पदोन्नोती समेत भइसकेकोछ । पुरा पढ्नुहोस्
गरीबी निवारणमा सहकारी ऐनको भूमिका
सोमवार, भदौ २, २०७६ सेतोखरी
धेरै ब्यक्तिहरु मिलेर गरिने सामुदायिक वा उपभोक्ताहरु नै व्यवसायी भई खोलिएको व्यवसाय नै सहकारी हो । सहकारी शब्दले कुनै पनि निश्चित र साझा उद्देश्य प्राप्त गर्न संगै मिलेर गरिने कार्यलाई जनाउँदछ । सहकारीता भनेको समुदायमा व्यक्तिहरुसंग छरिएर रहेको साधन स्रोत,सीप,पुँजी र प्रविधि एकिकृत गरी सामूहिक रुपमा काम गर्नेर लगानी तथा योगदान अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्ने आर्थिक सामाजिक पद्धती हो भन्ने हो बुझिन्छ । ब्यक्तिहरु बिचको सहकार्य र सामूहिक प्रयास क्षमताबाट निश्चित उद्देश्य प्राप्ती सहज हुने अवधारणाबाट सहकारीताको विकास भएको मानिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
एसपी ओलीको आधा घण्टाअघि सरुवा, पछि बदर मगलवार, पुष २९, २०७६ 2302
एक करोड लागतमा खुल्यो सद्भाव कलर हाउस
बर्दिया ट्रयाक्टर दुर्घटनाः एक जनाको मृत्यु, १५ जना घाइते, ३ अवस्था गम्भीर
भृकुटीनगर विकास समितिको अध्यक्षमा पुनः विष्ट
थारुबस्तीमा माघिको रौनक
‘दाऊदले काठमाडौंबाट भारतमा नक्कली नोट पठाउँछन्’
बाँकेमा अपराध बढ्यो, ६ महिनामै ५ सय ६४ मुद्दा दर्ता